महानायक विवाद फेरी चुलियो सबिता भट्टराईले राजेश हमाल र भुवन केसीको गरी दिइन पर्दाफास-भिडियो सहित « Etajakhabar
केही दिन अगाडि निर्देशक शोभित बस्नेतले पनि ‘महानायक’ बिषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति मा,फी मागेका थिए । उनले ‘महानायक’ पदवीमाथि प्रश्न उठाएपछि ठूलै वि,वाद जन्मिएको थियो । वि,वाद शोभितको फिल्म ‘डाँडाको वरपीपल’ बहिस्कार गर्नेसम्म चर्चिएपछि उनले ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा अबदेखि राजेश हमाललाई ‘महानायक’ मान्ने बाचा नै गरेका थिए ।
वास्तविक माहानायक को हो ? के आधारमा कसलाई माहानायक मान्ने ? के माहानायक पदवी सरकारले दिएको हो ? जस्ता प्रश्न उब्जिएका छन, प्राय दर्शक राजेश हमालालाइ माहानायक मान्छन, कसैले शिव श्रेष्ठ वा भुवन केसी हो माहानायक हो भनेर बोले भने राजेश हमालका फ्यान उनिहरु माथी खनिन्छन । यसै बिषयमा वक्ता सबिता भट्टराईले आफ्नो बिचार राखेकी छिन हेरौ भिडियोमा